The Best Hoverboard Self Ukulinganisela Isithuthuthu 2017 - Jomo Technology Co., Ltd
The Best Hoverboard Self Ukulinganisela Isithuthuthu 2017
Isizathu yokubiza scooter self balancing njenge "Hoverboard" kukuba ngoxa ekhwele, kubonakala ngathi wafukama inani intshi ngasentla emazantsi. Khumbula ukugcina uqhagamshelwano emhlabeni. Le ivili-ezimbini ezibalaseleyo self balancing scooter yombane ukuba ukulungele ukunika indlela amava ozinzileyo ngakumbi ngenxa neentlobo zayo. Uninzi lwezi ngezithuthuthu ukuze kuhlawuliswa efanelekileyo ngaphandle kwebhokisi, oko kunika kraca rider elitsha malunga kangangesiqingatha seyure izicelo ekhwele kwangoko kunokuba makabekwe ityala ngokupheleleyo. Ibhodi iye ngesantya esiphezulu ka-12km ngeyure nganye kwaye kunokuba lula ukunqumla iinduli namathambeka ukuba nezinye iibhodi yiphathi. Ungaze ushiye oko eziplagwe ukuze malini ubusuku kwaye ugcine i kwi umlindo ukujula lobushushu ibhodi yakho ngeli nto ukutshaja. Isikhalazo inkulu ngokubhekiselele kwiingxaki kunye nenkqubo yokutshaja
Le self balancing scooter smart , njengomthuthi omdala buqu ukuza ne-Bluetooth (njengokuba imfuno zakho), Kulula ngakumbi ukonwabela umculo ukuzikhubekisa kuyo. It Kananjalo has Motors 500W, elinamandla lokwenza ukulungele kwaye abaqhelekileyo ukusebenzisa. Kwakhona nawe uqinisekise ukuba scooter yakho yokukhetha umntu umthamo ibhetri enkulu. Kuba lo, kufuneka ucinge iinketho phakathi nodweliso lweenkqubo ezahlukeneyo eziquka ukhuseleko, leyo engathethekiyo apha, isantya, esiye ngoku sele sathetha ngayo, ubunzima ubuninzi ukuze inkxaso phakathi izinto ezahlukeneyo. Yinto ulinganisa nangona ukuba nakho ukuguqulwa ayikho ngumba omkhulu kuwe ngenxa nto zonke zezinto ezingakhetha. Iinketho It a ikhulu% unique ukwazi kwakuthetha ukuba banikele kuwe ubuchule ekhwele ethandekayo. Ukuba ingaba nkulu mnandi kangangeminyaka emininzi kwaye unikeze ngendlela ekhethekileyo ukuze ngeenxa.
Ngoku makhe makayiqhawule ngumnikazi, ukuze ufumane ukungcamla le rush engqondweni-bevuthela. Kwakhona, oko andiyi kuyaphula nje nkqu suku nosebenziso losuku nosuku. It yenzelwe wonke umntu ekwi-ukusetyenziswa rhoqo njengenye ye yokudlala yokudlala izityebi. Ukufunda ufunde indlela uhambo hoverboard kufanele kube mnandi kakhulu emva kokuba ufunde indlela imisebenzi isixhobo kunye nendlela amacandelo banxibelelane nabanye. Ixesha ngasinye Cruise le nto yonke emkhenkceni siyeka ukuthatha uhambo. Abakhweli waba test ngcono iinxalenye ivili ngoku kwaye kwakhona. Ukulawula i hoverboard kunye iseti ivili ezincinane kulula kwaye kufuneka ukuthambekela ukuphendula ngokukhawuleza kunjalo namasondo ezinkulu kuthatha ixesha ukugqithisa siphelele ukujika yakho. Ngathi thina ukukhankanya iingcali bendlela zonke hoverboard kule ngxelo, efanayo sibe ntoni hoverboard PowerBoard. Kodwa kukho nezinye iinkcukacha eziyimfuneko ukuze jonga kwi. Njengoko ke 2017, abantu ngokuqinisekileyo uya jonga kwi wena ube imvakalelo emangalisayo kunye nomxube nomona. Yeyona ukhetho ikhuselekileyo kuba KOOWHEEL kufuneka hoverboards intle ukusuka kubenzi aphezulu okanye ukwenza ushishino iinkampani ezininzi iindawo eziphakamileyo hoverboard lemveliso kunye nexabiso lolokwenene, ixabiso ezifikelelekayo.
ixesha Post: Sep-19-2017